Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #155
ငါ Convair 880 & 990 ၏အလွန်ကြီးစွာသောဝါသနာရှင်ဖြစ်၏, အဘယ်သူမျှမကံမကောင်းအများအပြားလပေါင်းများစွာတစ် ဦး VC ကိုနှင့်အတူ install လုပ်ဖို့တကြိုးစားနေခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုသူတို့မျှဝေလိုသော VC နှင့်အတူ 880 သို့မဟုတ် 990 ရှိသလား။ ငါ HJG စစ်ဆေးမှုများတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဂိမ်းထဲမှာပေါ်လာဘူး။ သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပြီးနောက်မှာတော့သူတို့မှာ VC မရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်း AA Paint ၌ရေးဆွဲခဲ့သည့် Virtual Airline site တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ၎င်းဂိမ်းသည်ပြသခဲ့သည်။ VC မရှိပါ။ ကျွန်တော်ဟာဆဲလ်ဖုန်းတွေအများကြီးလေ့လာနေဆဲမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့ကိုလေယာဉ်တွေထဲမှာ VC ထည့်သွင်းခြင်းအကြောင်းရေးသားမှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုသိလား၊ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #156
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #158
ok ဘယ်မှာသင်ဤအလှတရားကိုရှာဖွေခဲ့ကြ ???
ငါသည်ငါ့စုဆောင်းခြင်းမှသူမ၏ add ရမယ်!
အဆိုပါ VC ကိုပြဿနာကြောင့်ကျနော်ရိုးရိုးသားသားလူကိုမသိရပါဘူး။ က CS ကို C-130 သို့မဟုတ် 707 အတွက်င်မဟုတ်လျှင်ကျွန်မရိုးရိုးသားသားအဆိုပါ VC ကိုတစ်ပန်ကာခဲ့ဖူးပါဘူး
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #159
တစ်ဦး FB Group မှခုနှစ်တွင် Lemme post ကိုငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးရှိသိကြလိမ့်မည် .... အတွက်ပါပဲ!
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #163
virtualaal.weebly.com/fleet.html ငါကနေ download လုပ်တယ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #164
သငျသညျစိတ်ဝင်စားနေလျှင် ya ကိုသိ ... ငါအနည်းငယ်ကောင်းသောလေယာဉ်မှူးသုံးလို့ရတယ်
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #166
ငါအတော်တော်သစ်ကိုဖြစ်ကြောင်းကို FSX ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဒီအချက်မှာအကောင်းတစ်ဦးလေယာဉ်မှူးထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါ sim အတွက်တိုးအဖြစ်သို့သော်လည်းငါသည်အရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ နှင့်အမေရိကန်အဲဒီအစောပိုင်းလေယာဉ်နဲ့ဆေးသုတ်, ငါ့အကြိုက်ဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပါဘယ်တော့မှမ ..
Convair 990A & FSX3နှစ်ပေါင်း5months ago #167
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကအချက်ခမှအမှတ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ရနိုင်ပြီး, ဆင်းသက်ပေါ်တွင်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုနမ်းလို့ရပါတယ်အဖြစ်, သင်အရမ်းရယ်ရတယ်ကောင်းသောပါပဲ။ အခုအချိန်မှာကျနော်တို့ရှိသည်အသက်အကြီးဆုံးလေယာဉ်တစ်ဘိုးအင်းညှပ် 314 ဖြစ်ပါသည်
ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးပု 707 ပါလိမ့်မယ်
0.341 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်